Ngwarira Kuisa Akawanda Google Analytics Zvinyorwa | Martech Zone
Chipiri, Gunyana 2, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Nekubatanidzwa kwakawanda kwazvo kwematurusi kune akawanda masisitimu manejimendi manejimendi, tiri kuona akawanda evatengi vedu aine nyaya neGoogle Analytics zvinyorwa zvinoiswa mukati peji kakawanda. Izvi zvinokanganisa yako analytics, zvichikonzera kuburitsa pamusoro pevashanyi, mapeji pakushanya uye pasingaite bounce rate.
Nhasi chaiye isu taive nemutengi uyo aive nemapulagi maviri akatakurwa uye kugadzirirwa kuwedzera iyo Google Analytics script kune yavo blog. Uye kana plugin haina kunyatso tariswa kuti uone kana pakanga paine script yakatakurwa! Mhedzisiro yacho ndeyekuti kushanya kwaive kwakanyanya-kutaurwa uye yavo bounce mwero yaive inenge 2%. Kana yako bounce rate ichidonhera pasi pe3%, zorora uine dambudziko nezvakawanda zvinyorwa pane rako peji.
Kunze kweAnalytics, iwe ungaudza sei kana iwe waita izvi? Imwe nzira ndeyekutarisa kunobva peji rako uye nekutsvaga ga.js. Kunyangwe iwe uchida kuongorora saiti ne maakaundi akawanda eGoogle Analytics, panofanira kuve nechinyorwa chimwe chete.
Imwe nzira ndeye kuvhura ako ekuvandudza maturu mu browser rako uye utarise network yekutaurirana mushure mekuzorodza peji racho. Iwe unoona iyo ga.js script iri kukumbirwa kanopfuura kamwe?
Google Analytics inoshanda nekurodha script inounganidza ruzivo rwese, inochengetedza iyo ruzivo kumabhurawuza makuki uye inotumira kumaseva eGoogle. kuburikidza nechikumbiro chemufananidzo. Kana iyo script yakatakurwa kanopfuura kamwe, dzimwe nguva inodhira makuki, uye inotumira akawanda maficha zvikumbiro kuseva. Ndicho chikonzero iyo bounce rate yakaderera kwazvo… kana iwe ukashanyira anopfuura peji rimwe chete pane saiti, haurambe. Saka… kana zvinyorwa zviri kupfura kanopfuura kamwe kana iwe ukashanyira peji rimwe chete, zvinoreva kuti wakashanyira mapeji akawanda.
Tarisa peji rako uye rako analytics kuve nechokwadi chako analytics script yakaiswa zvakanaka pane yako saiti, uye ita shuwa kuti haukanganisa netsaira zvakapetwa kanopfuura kamwe. Kana ukadaro, data rako harina chokwadi.
Google Inotangisa Google Tag Manager
Gumiguru 3, 2012 pa 3:32 AM
Ndatenda, ini ndicha cherekedza pane izvi. Ini ndinofunga ichi ndicho chikonzero nei yangu ecommerce saiti isina chaizvo traffic inoenda pane yayo analytics mushumo. iyo google script yakasiyana nekodhi yekutevera iripo pane yayo google analytics mushumo. ndatenda shamwari.
Nov 14, 2013 pa6: 21AM
Mhoro Douglas, nzwisiso huru. Ini ndaive nekudonha kwakafanana kubva pandakatanga kumwe kuyedza paGoogle Tag Manager mavhiki mashoma apfuura: 4 Peji / Kushanya 🙂 uye kudzoreredza parizvino pa0.47% 😀
Kutevera yako posvo, heino mhedzisiro yangu:
1.Script: Kune 1 ga.js (ini ndakanamatira chete kodhi yeAnalytics uye Tag Manager mune yangu saiti). Ini handisi kuona mune yechipiri script (Tag Manager) chero chirevo kune ga.js asi chete gtm.js. Ini handina kodhi huru kungoti iwo maviri akabatanidzwa pamwechete (kutanga analytic, kwozoti TM), saka ini handitombofaniri kushandisa chishandiso, zvisinei ini ndakatarisa ne firebug futi.
2.Mutariri weTag Console ndakagadzira chiitiko chimwe chete (nguva imwechete yekugadzira, nguva imwechete yekutanga br kudonha). Ichi chiitiko chinonyanya kushanda seChinongedzo tinya muteereri weZvinobuda ma Links uye zvakangofanana neiya yakarairwa naJames Cutroni mubhurogu yake. Asi ini ndakaita shanduko diki kubva kupi. (Zvisinei ndakazvibvisa nhasi sezvo Izvo zvisina basa zvakanyanya sekufunga kwangu)
3. Ndichine mamwe ma link mashoma anobuda neakare onClick = "_ gaq.push ()" yakadzamidzirwa asi ese akaisirwa Non-yekudyidzana tinya kuChokwadi.